iWatermark Pro 2 yeWindows - # 1 Win Watermark Izithombe App | Plum Amazing
iWatermark Pro 2 ye-Windows - # 1 Win Watermark Izithombe App
Okusheshayo: 3 / 13 / 22
Dinga: 64 bhithi, 10, 11
Kusha ngo-2022. IWatermark Pro 2 ye-Windows. I-Watermark Yokuvikela Izithombe / Ubuciko Bakho
I-iWatermark Pro 2 Ye Windows 10 & 11 iwukubhala kabusha okukhulu kwenguqulo yasekuqaleni edumile. I-interface yomsebenzisi iyaguquguquka, i-themeable futhi isebenza kahle kuma-monitor high resolution. Le nguqulo futhi iyashesha, yenziwe kahle kakhulu futhi izoqhubeka nokuthuthukiswa.
I-iWatermark isebenza njengohlelo lokusebenza oluzimele lwe-watermarking yedijithali nezinye iziphequluli zezithombe njenge-Adobe Lightroom, Izithombe ze-Google, i-ACDSee nezinye eziningi. Uma ubeka izithombe zakho kuwebhu noma ubani angazithatha futhi azisebenzisele noma yini ayithandayo. Ungasusi, ngisho ne-watermark yedijithali encane kakhulu izosiza ukuvikela impahla yakho yobuhlakani. I-Watermark 1 noma izinkulungwane zezithombe ngesikhathi. Idizayinelwe amadeskithophu e-Windows akamuva namakhompyutha aphathekayo. Isetshenziswa abasaqalayo, ochwepheshe, nezinhlangano ezinkulu. Izinguqulo ezitholakalayo zeWin, Mac, Android futhi iOS. Yakhelwe ukonga isikhathi sabathwebuli zithombe.
Isoftware Ehamba phambili Yezithombe Ezihamba Phambili Eziyi-10 2020 - nguLiza Brown, Filmora
Idinga i-64 bit .Net Core 3.1.19 Isikhathi sokusebenza sifakwe kuqala.
Thepha lapha ukuze ulande.
iWatermark Pro 2 yeWindows - # 1 Win Watermark Photos App ubuningi
Usizo / Ibhukwana
iWatermark uhlelo lokusebenza lwe-world watermarking No. 1 lwe-Mac, Windows, iPhone, iPad ne-Android. I-watermark yesitayela i-Copyright esithombeni ngemizuzwana. IWatermark yenziwa ngabathwebuli zithombe futhi yenzelwa bona.
I-iWatermark Pro okweMac neWindows kungashintshana ngama-watermark athunyelwe. Njengohlelo oluzimele lusebenza neLightroom, Photoshop, Picasa, ACDSee, Cumulus, Portfolio, PhotoStation, Xee, iView, PhotoMechanic nabanye abahleli bezithombe. IWatermark iyisoftware ehamba phambili kakhulu kuwo wonke amapulatifomu futhi ngokuhlangana nenye isoftware.
iWatermark ku-iPhone / iPad naku-Android yizinhlelo zokusebenza zomdabu ezisebenza ngqo nekhamera yefoni / yamaphilisi.iWatermark iyithuluzi elibalulekile kunoma ngubani onekhamera yedijithali, ochwepheshe nabaqalayo.
Skrolela phansi bese uqhafaza izixhumanisi ezingakwesobunxele ukuthola eminye imininingwane nge-iWatermark. Thola ukuthi kungani i-watermarking kuwumqondo omuhle. Funda mayelana nezici kunguqulo ngayinye.
Buyekeza: Isofthiwe Engcono Kakhulu Yokuphawula
“IWatermark Pro yisoftware enezici eziningi kakhulu engiyibuyekezile, futhi inezici eziningi engingazitholanga kolunye uhlelo. Ngaphandle kwekhono lokuphatha ama-watermark asisekelo ombhalo nesithombe, kukhona okunye okwengeziwe okufana nama-watermark ekhodi ye-QR kanye nama-watermark angama-steganographic, afihla imininingwane ngokusobala ukuvikela amasela ezithombe ukuthi angavele akhiphe noma amboze i-watermark yakho. Ungaphinda uhlanganyele ne-akhawunti yeDropbox ukonga izithombe zakho ezinamakhompiyutha, okuwusizo kakhulu ekwabelaneni okusheshayo namakhasimende. ”
Kuyabonakala Isithombe &
Ividiyo Noma imuphi umbhalo ofaka imethadatha enezilungiselelo zokushintsha ifonti, usayizi, umbala, ukujikeleza, njll.
Thumela umbhalo othi Arc
Ividiyo Umbhalo osendleleni egobile.
Ividiyo Umdwebo kuvamise ukuba yifayela le-.png elisobala elifana nelogo yakho, uphawu, uphawu lwe-copyright, njll.
Ividiyo Sebenzisa i-vector engaphezu kwe-5000 eyakhelwe ngaphakathi (i-SVG's) ukubonisa ihluzo ezinhle kunoma yisiphi isayizi.
Ividiyo Umngcele wevektha ongalulwa uzungeze isithombe futhi wenziwe ngezifiso usebenzisa izilungiselelo ezahlukahlukene.
Ividiyo Uhlobo lwebhakhodi olunolwazi olufana ne-imeyili noma i-url ekubhaleni kwalo.
Ividiyo Sayina, ngenisa noma uskene isiginesha yakho ku-watermark ukuze usayine okudalile kwakho.
Ayibonakali Isithombe &
Ividiyo Ukungeza imininingwane (njenge-imeyili yakho noma i-url) engxenyeni ye-IPTC noma i-XMP yefayela lesithombe.
Ividiyo I-StegoMark yindlela yethu ephathelene nokufaka imininingwane efana ne-imeyili yakho noma i-url kwimininingwane yezithombe uqobo.
Kuyabonakala Photo Shintsha usayizi wesithombe. Isebenziseka ikakhulukazi ku-Instagram
Kuyabonakala Photo Izihlungi eziningi ezingasetshenziswa ukwenza isitayela kubukeke njengezithombe.
Ividiyo Khetha izinketho zokuthekelisa zamafomethi, i-GPS nemethadatha
“Ngezansi: Uma ufuna indlela yokwenza i-watermark impahla yakho yezithombe kuwebhu, sincoma i-iWatermark +.”- UNate Adcock, i-iPhoneLife Magazine 1/22/15
Izinhlelo zokusebenza zomdabu ze-iPhone / iPad, iMac, iWindows ne-Android
Izinhlobo eziyi-6 zama-watermark
Umbhalo, ingcaca, i-QR, isiginesha, imethadatha kanye ne-steganographic.
Isebenza nawo wonke amakhamera, Nikon, Canon, Sony, Smartphones, njll.
Cubungula i-watermark eyodwa noma i-batch izithombe eziningi ngasikhathi sinye.
Dala ama-watermark usebenzisa imethadatha efana nombhali, i-copyright namagama asemqoka.
Faka ama-watermark ethu angabonakali we-StegoMark ukuze ufake imininingwane kusithombe
Ama-Watermark wekhodi ye-QR
Dala kumakhodi we-QR wohlelo lokusebenza nge-url, i-imeyili noma eminye imininingwane ongayisebenzisa njengama-watermark.
Dala ama-watermark wombhalo ngamafonti ahlukene, osayizi, imibala, ama-engeli, njll.
Dala ama-watermark womfanekiso noma we-logo usebenzisa amafayela wesithombe asobala.
Gcina wonke ama-watermark akho endaweni eyodwa yakho nebhizinisi lakho
Sebenzisa isiginesha yakho njenge-watermark njengabadwebi abadumile
Ama-watermark amaningi ngasikhathi sinye
Khetha bese usebenzisa ama-watermark amaningi ahlukahlukene ezithombeni.
I-Watermark isebenzisa i-copyright yakho, igama, i-url, i-imeyili, njll ezithombeni.
Khetha okukodwa noma inani lama-watermark kusuka ekhabetheni.
Gcina noma khipha imethadatha ye-GPS yobumfihlo
Shintsha usayizi wezithombe
Kuzo zombili izinhlobo zezinguqulo ze-Mac ne-Win zingasethishwa usayizi.
Isebenzisa i-GPU, i-CPU nokucubungula okuhambisanayo ukusheshisa i-watermarking.
I-JPEG, i-PNG, i-TIFF ne-RAW
Sebenzisa amasu amaningi we-watermarking ukuvikela izithombe zakho
I-Watermark ikhumbuza abantu ukuthi isithombe siyimpahla ethile yomqondo othile
ngezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Adobe Lightroom, Izithombe, Imbobo nazo zonke ezinye iziphequluli zezithombe
Thekelisa, yenza isipele futhi wabelane ngama-watermark akho.
Imiphumela ekhethekile yokucubungula izithombe zangaphambi nangemuva
I-Watermark nganoma yiluphi ulimi. Yenzelwe izilimi eziningi
Lawula Isikhundla Esiphelele
Ama-watermark angalungiswa ngamaphikseli.
Lawula Isikhundla Esihlobene
Ngesikhundla esifanayo kumaqoqo wezithombe zokuma okuhlukile nobukhulu.
Yabelana nge-imeyili, Facebook, Twitter kanye nezinye izingosi zokuxhumana.
Setha ukuhamba komsebenzi kokuqamba kabusha amaqoqo wezithombe ngokuzenzakalela.
Iqoqo lama-watermark amafolda wonke ezithombe ngasikhathi sinye.
Sebenzisa ama-watermark amaningi ngasikhathi sinye (i-Pro kuphela) .Import / Export / Abelana ngama-watermark owakhayo (Pro kuphela).
Kala zonke izithombe zakho ukuthi zilingane.
Idala izithonjana zemifanekiso yakho enamanzi.Sebenzisa ama-logo, ama-TIFF noma ama-PNG amalogo ama-watermark akho.
Setha ukubonakala kwe-watermark yakho.
Zungezisa, sula, bese ubeka i-watermark yakho, noma kuphi esithombeni sakho.
Sebenzisa imiphumela ekhethekile efana ne-aqua, isithunzi kanye / noma i-emboss ku-watermark yakho.
Gcina imethadatha ethwetshulwe ngesithombe, njenge-EXIF, i-IPTC ne-XMP.Ukufaka nokukhipha isithombe sakho esine-watermark sibe yizinhlobo ezahlukahlukene zezithombe.
Engabizi kakhulu, esebenza kahle kakhulu, esheshayo futhi elula ukuyisebenzisa bese i-PhotoShop. IWatermark yakhelwe kuphela i-watermarking.
Dala futhi usebenzise amakhodi we-QR (njengamabhakhodi) njengama-watermark (i-Pro ne-iPhone / i-iPad kuphela) Sebenzisa okusetshenziswe kuma-watermark we-Creative Commons (Pro kuphela).
Setha i-watermark yendawo ngo-x, y eqinisekisa ukuthi i-watermark yakho ivela endaweni efanayo noma ngabe usayizi noma isinqumo siyini isithombe.
Izici eziningi kakhulu ongazibala. Landa ukuze uzame mahhala.
Uma wabelana ngesithombe esimangazayo osithathile nge-imeyili, i-Facebook, i-Instagram, i-Twitter, njll. Kungenzeka kakhulu ukuthi sisabalale bese zindiza emhlabeni zingasalawuleki futhi ngaphandle kokuxhumeka kuwe njengomdali. Kodwa usayine ngokwedijithali umsebenzi wakho / izithombe / ingcaca / imidwebo usebenzisa iWatermark enegama lakho, i-imeyili noma i-url futhi izithombe zakho zinokuxhumana okubonakalayo nokusemthethweni kuwe nomaphi lapho ziya khona.
Yakha umkhiqizo wenkampani yakho, ngokuba nelogo yenkampani yakho kuzo zonke izithombe zakho.
Gwema ukumangala kokubona ubuciko bakho kwenye indawo kuwebhu noma esikhangisweni.
Gwema izingxabano namakhanda nabakhohlisi abathi bebengazi ukuthi nguwe okudalile.
Gwema ukumangalelwa okubizayo okungabandakanyeka ngemuva kwalokho.
Gwema izimpikiswano zengqondo.
Izibonelo Zobusela Besithombe
Izithombe ezibucayi ezisetshenziswe ngokungemthetho
Kungani iWatermark kuwumqondo omuhle. Bheka lezi zindaba zezithombe ezisetshenziswe ngaphandle kwemvume. Ivula kuthebhu yesiphequluli esisha.
Iningi le-watermark lokusebenza lingenza i-watermark yombhalo kanti abambalwa bane-watermark ebonakalayo. IWatermark iyisa kude kakhulu futhi inezinhlobo ezingama-watermark eziyi-12. Uhlobo ngalunye lusebenza ngenhloso ehlukile.
Amanye ama-watermark ayabonakala kanti amanye awabonakali. Zombili zisebenza ngezinhloso ezihlukile.
I-watermark ebonakalayo ilapho ubeke khona uphawu lwakho noma isiginesha esithombeni sakho.
I-watermark engabonakali ifihliwe kuso sonke isithombe, ngaphakathi kwekhodi eyikhiqizayo, iphethini ebonakalayo elikhomba njengobuciko bakho.
Le ndlela ivame ukubiza kakhulu futhi inezithiyo ezimbili ezinkulu. Cishe ngaso sonke isikhathi kunciphisa ikhwalithi yesithombe, futhi kungakhuthaza abantu ukuba bakopishe umsebenzi wakho ngoba awubonakali unamalungelo obunikazi. Kuzona zozimbili lezi zinhlaka, umklami wezithombe onekhono ohlose ukusebenzisa isithombe sakho, angathola izindlela zokususa i-watermark yakho ngenani lekhwalithi yesithombe.
Sibona sengathi uma uthengisa izithombe kusebenza izinjongo ezi-2.
1. Kwenza abantu bazi ukuthi lesi akusona nje isithombe esivulekile esingatholwa nganoma yikuphi ukusetshenziswa.
2. Ingaqukatha imininingwane yakho. Njengegama, i-imeyili, isayithi, noma yini ofuna ukuyikhombisa ukuze abantu bakwazi ukuxhumana nawe.
IWatermark ingumxhasi osemthethweni we:
Ukuqhathanisa iWatermark Pro noma i-Mac / Win ne-iWatermark + ye-iPhone / iPad / Android
Zonke izinhlobo ze-iWatermark zibhalwe ngolimi lwendabuko lwaleyo OS. IMac neWin banezici ezifanayo ngoba zombili ziyizinhlelo zedeskithophu. Izinhlobo ezi-2 ze-OS zeselula iOS ne-Android zinezici ezifanayo komunye nomunye.
Izici zeWatermark Ku-iOS naku-Android Ku-Mac naku-Windows
Thwebula iOS Android Mac Windows
Inombolo enkulu yezithombe Okungenamkhawulo (ngokusekelwe kwimemori) Okungenamkhawulo (ngokusekelwe kwimemori)
Ama-watermark awodwa Unlimited Unlimited
Speed 64 kancane (Kuyashesha kakhulu) 64 kancane (Ngokushesha)
Icubungula Okufanayo Iyazi Imicu eminingi isebenzisa ama-CPU / ama-GPU amaningi Imicu eminingi isebenzisa ama-CPU / ama-GPU amaningi
I-AppleScriptable (Mac Kuphela) - Yebo, kufaka phakathi imibhalo nezikripthi zemenyu
I-Shell Extension ye-Win Explorer - Qhafaza kwesokudla ukufaka ama-watermark ngqo.
Amaphrofayili Wemibala - Isebenzisa amaphrofayili akhona futhi angakhethwa
Okukhipha Ifolda Isebenzisa Izandiso Zokuthekelisa Ezitholakalayo izilungiselelo zokukhishwa kwefolda
Izinhlobo Zefayela Lokukhipha jpg jpg, png, tiff, psd, bmp, jpeg 2000, clipb
Ngenisa ama-watermark Ku-iOS, Iza nge-Android Yebo, kusuka kunguqulo ye-Mac noma ye-Win
Thekelisa ama-watermark Ku-iOS, Iza nge-Android Faka kungobo yomlando noma yabelana nge-Mac noma i-Win version
Hlela ama-Watermark Kuthuthukile (ezinye izici eziningi) Kuthuthukile (ezinye izici eziningi)
Ikhabethe le-Watermark Hlela, hlela, ukuhlola kuqala Hlela, hlela, khiya, ukuhlola kuqala, shumeka
Dala i-Watermark Droplet - Idala uhlelo lokusebenza lwe-watermarking olunikezelwe
Imethadatha (XMP, IPTC) I-IPTC I-XMP ne-IPTC Inwetshiwe
Faka / Susa iMethadatha IPTC / XMP / GPS IPTC / XMP / GPS
Shumeka imethadatha ku-Watermark IPTC / XMP / GPS IPTC / XMP / GPS
Amathegi wemethadatha njengama-watermark I-IPTC, iTiff, Izimfanelo zeFayela, i-Exif, i-GPS I-IPTC, iTiff, Izimfanelo zeFayela, i-Exif, i-GPS
Effects Abaningi Abaningi
Indawo ye-Watermark Setha ngokuhudula nokuphina. Setha ngokuhudula nokuphina.
Isikali Watermark Okwangempela, okuvundlile nokuqondile Okwangempela, okuvundlile nokuqondile
Ukufometha kombhalo kwe-Watermark ifonti, usayizi, umbala, ukujikeleza, ukwenza izinto obala, isithunzi, umngcele ifonti, usayizi, umbala, ukujikeleza, ukwenza izinto obala, isithunzi, umngcele
Background umbala, ukukhanya, isikali, umngcele, isithunzi, ukujikeleza umbala, ukukhanya, isikali, umngcele, isithunzi, ukujikeleza
Usizo Ku-inthanethi, ingqikithi futhi inemininingwane Ku-inthanethi, ingqikithi futhi inemininingwane
Amakhodi we-QR njengama-Watermark Dala amakhodi we-QR asetshenziswa njengama-watermark Dala amakhodi we-QR asetshenziswa njengama-watermark
Ama-Watermark we-Creative Commons - Ungeza kalula noma iyiphi i-watermark ye-CC
I-Quick Look Plugin - Ibonisa imininingwane ye-watermark ethunyelwa kwamanye amazwe
Isebenza nazo zonke Iziphequluli Zezithombe Yebo Yebo
I-plugin ye-iPhoto - I-Watermark ngqo ku-iPhoto
Inani Izinhlobo zamahhala ze- $ 1.99 ne- $ 3.99 iTunes / Google Play Shareware
"IWatermark Pro iyisoftware enezici eziningi kakhulu engiyibuyekezile, futhi inezici eziningi engingazitholanga kolunye uhlelo." - I-Best Watermarking Software 2018 - UThomas Boldt
I-iPhone / iPad / iOS iWatermark +
I-iPhone / iPad / iOS ye-iWatermark. Ukubuyekezwa okungaphezulu kuka-1500 5 star on iTunes Apps store.
Uhlobo lwe-Mac lweWatermark Pro
7/15/16 Ukubuyekezwa yi-GIGA ngesiJalimane
Ukuhlanganiswa kwezibuyekezo ku-Tumblr
“Uthole Izithombe? Beka I-Watermark Kwelinye Nelinye Ukuze Ufune I-copyright Yakho ”- UJeffrey Mincer, I-Bohemian Boomer
Umagazini wase-Italy I-SlideToMac
Ukubuyekezwa kweSMMUG kweWatermark Pro nguL. Davenport
Ukubuyekeza ngokuphelele eSweden kwe-iWatermark Pro. UHenning Wurst. Funda isihloko sonke
"Kuyisicelo esihle senhloso yaso yokuqala, ukuhlanganisa i-watermark ebonakalayo ezithombeni zakho zedijithali, futhi yenza lo msebenzi kalula futhi unezinye izici ezinhle ezengeziwe zokwenza impilo yakho ibe lula."
Funda isihloko sonke
“Uma udinga ukufaka ama-watermark ezithombeni eziningi, i-iWatermark ihlinzeka ngomsindo wakho omkhulu. Ayigcini ngokuphumelela ngokubabazekayo emsebenzini wayo oyinhloko, kepha ingeza nezinye izinto ezibalulekile zokugcina izikhathi ephaketheni. ”
UJay Nelson, IMacworld, amagundane angu-4.5 kwangu-5.
“Ubuhle beWatermark yinhlanganisela yayo yokusebenziseka kalula nokusebenza kwayo. Uma ngabe wake wafuna ukuzama i-watermarking, noma uma usuvele uyayenza futhi uzokwamukela indlela yokukwenza ngokushesha futhi kalula, iWatermark iyinsiza engabizi futhi ehlaba umxhwele. Angikasiboni isixazululo esingcono kuneWatermark yeScript Software. ”
UDan Frakes, Macworld
Isoftware ye-copyright evikela eyodwa noma ithani
“Lo mkhiqizo obukeka ulula udlala izici eziningi futhi usekela cishe lonke uhlobo lwefayela ongalucabanga. I-interface elula kakhulu, ehlanzekile, yokudonsa nokudonsa isebenza kahle futhi idinga nje ukulungisa okuncane kokukhetha ukubeka uphawu lwakho emsebenzini wakho. Ngaphezu kwalokho, isoftware isekela i-Exchangeable Image File (EXIF) kanye nekhodi ye-International Press Telecommunications Council (IPTC).
Kukhona ezinye izinto ze-watermarking shareware laphaya, kepha azikho eziphelele futhi ezinikeza ukuxhaswa ngefomethi ye-IPTC. ”
UDaniel M. East, Mac Design Magazine, Isilinganiso:
“Ungazivikela kanjani izithombe zakho? IPlum Amazing inesisombululo esingabizi ($ 20) nesisombululo esilula: iWatermark. Umoya omuhle ongawusebenzisa. Mane uhudule isithombe esisodwa noma ifolda egcwele izithombe kusikrini se-IWatermark ukusitshela ukuthi yiziphi izithombe eziku-watermark, bese ucacisa umbhalo we-watermark, njengo “© 2004 Dave Johnson. Nakhu lapho uhlelo luhle khona ngempela: Ungacacisa isithombe se-watermark esikhundleni sombhalo. Lokho kusho ukuthi ungafaka isithombe sakho esincane ekhoneni lesithombe uma uthanda. Bese usetha indawo ye-watermark – njengekhoneni noma maphakathi nohlaka – bese uyidedela idabuke. ”
UDave Johnson, PC Umhlaba
Ukubuyekezwa kweMacsimum News kunikeze izinkanyezi eziyi-9 kwezingu-10.
I-PDF ye-Digital Camera Magazine Article
Ukuqhathanisa i-watermarking ebonakalayo (iWatermark) ne-Invisible (DigiMark)
I-Cnet Landa amagundane ama-5
“Omunye engicabanga ukuthi ngiyawuthanda ngomkhiqizo wakho ukuthi ukubekwa kwe-watermark kusekelwe emaphesentini ohlangothini lwesithombe, hhayi inani elithile lamaphikseli. Whey lokho kubalulekile? Ngidubula ngekhamera engu-24.5MP namakhamera ali-12MP amaningana. Uma ngifuna i-watermark yami isondele ezansi kwesithombe neminye imikhiqizo kufanele ngibatshele ukuthi mangaki amaphikseli. Uma ngisebenza ngesithombe esingu-24.5MP inani lamaphikseli Ngifuna isithombe kude nesingezansi sizohluka ngokuqhathaniswa nesithombe se-12MP. Uhlelo lwakho lokusebenza lusebenzisa% yobukhulu. Ngingakusebenzisa uhlelo lokusebenza ezithombeni ezimbili ezihluke kakhulu futhi ukubekwa kwelogo kuzohlala kufana. Ngicabanga ukuthi lelo iphuzu elihle lokuthengisa. ”
UScott Baldwin - scottbaldwinphotography.com
“Njengomthwebuli we-surf osebenza ngokuzama ukwenza izithombe zami zishicilelwe, iWatermark ibe yi- $ 20 enhle kunazo zonke engake ngazisebenzisa! Wonke umuntu ufuna ukuthi uthumele izithombe nge-imeyili kepha bekudla isikhathi esiningi ukufaka ama-watermark ngesandla ukuzivumelanisa namafomethi amile naqondile. Ngizamile ukusebenzisa i-Photoshop Elements batch processing. Kunzima kakhulu ukukwenza ku-PS5. Lolu hlelo lungongele isikhathi esiningi sokushesha ifolda yezithombe bese ngiyithumela kubashicileli abahlukahlukene. ”
UDiane Edmonds - I-YourWavePics.com
“Sengichithe iminyaka eminingi ngizama ama-software ahlukahlukene ukungivumela ukuthi ngibuke izithombe zami, ngithole eyakho ngemuva kwezinsuku zokuzama izinhlobo ezahlukahlukene kepha eyakho ngokungangabazeki iyindlela elula nebiza kakhulu engihlangabezane nayo, ngenxa yomkhiqizo omuhle kakhulu, isigaba esiphakeme ”
“Senginesikhashana ngisebenzisa iWatermark futhi ngiyayithanda. Ngonyaka odlule ngilahlekelwe kakhulu ukuthengisa, ngenxa yokuthi imindeni ilande izithombe ezinobungakanani besikhwama kusuka kusayithi lami. Kulo nyaka bengisebenzisa iWatermark futhi ukuthengisa kwami ​​kukhuphukile. Abantu abafuni ukubona imininingwane ye-copyright maphakathi nesithombe. Kungumkhiqizo omuhle, intengo enhle futhi okulula konke ongayisebenzisa. Ngiyabonga ngokungisiza ngivikele umkhiqizo wami! Ukuthula, ”
Chris, I-Action Digital Photography
“Uhlelo lwakho lube nje lusizo olukhulu kimi. Ngangihlala ngifaka umshado wami, umcimbi nomfanekiso wesithombe ku-eventpix.com. Kusizile ukumisa ukusetshenziswa okungagunyaziwe komsebenzi wethu futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngiyabonga ngalokho. Sijabule ngokukhokhela uhlelo olukhulu. ”
UJon Wright, Ubuciko be-J & K! - http://www.artbyjon.com
“Ngibhala izindlu ku-craigslist zokuqasha bese ngiduna ezinye izithombe zami NGAPHAMBI kokuba ngithenge iWatermark. Manje abakhohlisi bakhetha elinye ilitshe njengoba ingosi yami ifakwa kupopayi! ”
I-Photoshop (idinga i-Quicktime)
I-PICT (Macintosh Kuphela)
I-BMP (Windows kuphela)
Amafomethi amaningi asekelwa nge-Quicktime. I-Quicktime ifakwe kuqala kuwo wonke ama-Mac asebenzisa i-OS X, futhi ikhululekile ukuyilanda kuwo womabili ama-PC ne-Mac.
Ifayela le-iWatermark Pro 2 Pad
- elungiselelwe ukunqoba 10 no-11
- Inkinga ye-stegomark elungisiwe ku-win 11
- ukuthuthukiswa kwe-misc
- [Kulungisiwe] Kukho konke ukucubungula wonke amanani manje asethwe kokumisiwe
- [Kulungisiwe] Kuphaneli Yokuphumayo, lapho ibhokisi likaqhwila elithi 'osonhlamvukazi abancane' lithikhiwe, zonke izithombe eziphumayo zilondolozwa ngezandiso zofeleba abancane. Uma ibhokisi lokuhlola elithi 'osonhlamvukazi abancane' lingahloliwe, zonke izithombe eziphumayo zilondolozwa ngezandiso zofeleba.
- [Kulungisiwe] Usayizi wesithombe ophumayo ushintshile lapho kungabikho usayizi omusha. Manje, isithombe esiphumayo sisigcina usayizi waso. Isithombe sokukhiphayo manje silondoloza ukubukeka kwesilinganiselo saso. Isithombe esiphumayo manje sigcina ukuminyana kwaso.
- isifaki sixazulula inkinga yokucubungula isithombe esisodwa ngokuphindaphindiwe ngenkathi kukhethwa i-watermark entsha noma i-watermark ehambayo.
- ukwenza kahle inkumbulo ekucubunguleni ukuze kusheshiswe ezinye izenzo.
- gcina usayizi wewindi oyinhloko kanye nemodi yokuvula
- Umbhalo wesimeli kumabhokisi ombhalo wokulondoloza i-watermark nama-watermark
i-ui: ukuthuthukiswa kwekhasi letimu, ikhasi lemethadatha kanye nekhasi lohlu lwama-watermark
- ama-watermark: ukuthuthukiswa ku-watermarking yombhalo
- izilungiselelo zokuhlunga ezithuthukisiwe ukuze ziboniswe kumsebenzisi uma isihlungi sivuliwe. amasethingi e-insures ahlala enohlobo olulodwa lwesithombe oluvuliwe. design ui ukuze wenze isiqiniseko sokuthi umsebenzisi akavuli isihlungi engazi futhi akakwazi.
- ukucubungula okufanayo. manje isebenzisa 3 cores. 50%+ ngokushesha kunangaphambili.
- manje ukugcinwa okuzenzakalelayo kokuphuma kwe-watermark kufolda ezenzakalelayo enegama losuku/isikhathi. ukulondoloza mathupha kufolda kusatholakala.
- kuhanjiswe + kanye - nezithonjana (zokudala noma ukususa i-waterark) phansi kwekhasi lohlu lwe-watermark. manje kunesikhala esengeziwe sama-watermark engeziwe.
- Izinguquko eziningi ze-ui ezixubile.
- kungezwe imigqa yokubamba kusihlukanisi ukuze ushintshe usayizi wendawo yezithombe eziyinhloko. manje bamba lezi ngokuchofoza ukuze unwebe amaphaneli efasiteleni elikhulu.
- ? isithonjana nenombolo yenguqulo ihanjiswe ekhoneni elingezansi kwesokudla sewindi elikhulu.
- ushintshe ukususa isithombe ukuze 'Sula Isithombe'
- Ukubuka kuqala Kokukhiphayo kulungiswe ukuze kuzimele ngokuzimela.
- wengeze i-watermark yedemo entsha ebizwa ngokuthi, 'Tag Metadata', ukukhombisa ikhono le-iWatermarks lokubonisa imethadatha ye-gps/exif/iptc engabonakali njengama-watermark avela ngaphakathi kwe-watermark yombhalo
Siyabonga kubo bonke abasebenzisi ngempendulo neziphakamiso, qhubeka nokuza. Usize ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza ngo-1000% futhi walwenza lwaduma. Sicela uzame omaka bombhalo ku-watermark entsha yedemo okukhulunywe ngayo ngenhla. Bona ukuthi yiziphi izinto ozisebenzisayo ongabeka kuzo omaka ikakhulukazi uma ungumthwebuli wezithombe onguchwepheshe.
- osayizi abengeziwe kuzindikimba zokuboniswa kokucaca okuphezulu.
- isigaba esisha sokufakwayo sivumela ukuhudula nokwehlisa izithombe kuphaneli engezansi nokubonisa izithonjana
- isigaba esisha sokufaka sivumela i-watermarking eyodwa ngesikhathi noma i-batch watermarking kalula.
- Ama-watermark edemo abuyekeziwe
- ixazulula ukuqondanisa kwephaneli engezansi
- kulungiswa isexwayiso se-Stegomarking ukukhumbuza umsebenzisi ukuthi asebenzise inombolo elinganiselwe yamashalo asuselwa kumlayezo nosayizi wesithombe.
- manje ukhumbula usayizi wewindi ngezibuyekezo.
- nezinye izinto eziningi. ukuthuthukiswa nokulungiswa
sibonga abasebenzisi ngayo yonke impendulo neziphakamiso.
- thumela impendulo manje ihlanganisa ulwazi lwe-sys. lena indlela engcono kakhulu yokuxhumana nathi uma unemibono, izimbungulu kanye/noma iziphakamiso. indlela eqondile eya edeskini losizo.
- ingeza imininingwane ye-iptc kusuka kweyangempela kuya kwesithombe(s)
- pref entsha. 'Vumela ukuboniswa kwephrofayela yombala kusihleli' iphrofayela ekhethiwe yomsebenzisi isetshenziswe kusihleli. vala ngokuzenzakalelayo. ingashintshwa ukuze ubuke isithombe ne-watermark ngephrofayili yombala. icishiwe konga amandla ne-cpu.
- kukhishwe isilayidi se-opacity sangemuva esihlukile ku-watermark yehluzo (Izithombe, i-QRCode)
- shintsha ilogo ye-watermark yeDemo Graphics
- kungezwe ukusebenza 'Yenza Okumhlophe Kubonakale'
- Ikhasi lokuqala izinguquko ezihlukahlukene
- kuphaneli yemethadatha pref 'kopisha imethadatha isuka kokufakwayo iye kwi(ama)fayela yokuphumayo' manje yenza njengoba isho. 'Ungakopishi idatha ye-GPS ukuze uthole ubumfihlo' uma ingahloliwe izokopisha idatha ye-gps esithombeni/ezithombeni ze-watermark.
- gcina i-watermark ngaphambi kokuthi umsebenzisi ahambe.
- isibukeli se-stegomark silungisiwe
- izinto ezibikwe ngolwazi ziyi
- Izinguquko ze-graphics watermark ezixubile
- ezinye izinguquko ze-misc.
- isifaki manje sifaka kuphela i-iwatermark pro ukuze iwine. ayifaki .net.
- isifaki esisha esifaka i- .net core 64 bit yokonga isikhathi sabantu ekufakweni. lolu hlaka lweMicrosoft lunamathuluzi esiwasebenzisayo.
- ingezwe imajini yesokudla ku-Input, Output and Import Buttons ku-Watermark List Panel
- engeza inkinobho Susa ku-watermark yehluzo ngaphansi kwe-Khetha inkinobho - Ukufundwa kwenkinga okungaguquki kusuka ku-z drive
- kufakwe imethadatha eyengeziwe kumbukeli wemininingwane yesithombe
- inkinga elungisiwe lapho i-stegomark ingenayo iphasiwedi
- okuthiwa iWatermark Pro 2 ukuyihlukanisa nenguqulo yangaphambilini. lokhu kuzovela nasemibhalweni nakwimanuwali.
- le nguqulo ye-iWatermark Pro 2 ye-Win ingasebenza ngokubambisana nenguqulo yoqobo ebizwa nge-iWatermark Pro for Win ngaphandle kwenkinga.
- inkinga yesicelo se-stegomark esinqunyiwe
- Ishintshe indawo yokudonsela phansi izilungiselelo zesithombe se-watermark nendawo ukuze ukhethe ama-logo neminye imidwebo
- i-arc yombhalo ithuthukile
- ama-watermark ama-demo akhiyiwe ukuze angakwazi ukususwa ngengozi.
- ama-watermark manje azungeza isikhungo sawo
- i-opacity yazo zonke izinto kuma-watermark i-opacity yayo ihlelwe ndawonye.
- umbala ongemuva usethwe futhi wagcinwa manje.
- Amafonti igama eliboniswe kuhlu manje elikhonjisiwe kusitayela sefonti
- ukuthuthuka okuncane kokufaka nokukhipha ui
- i-beta yokuqala
- isifaki esisha
izinguquko zangaphambilini ezenziwe ku-iWatermark Pro 1 ezitholwe lapha.
- alpha lokuqala
- isebenza kahle kuma-monitors aphezulu
- i-ui ehudulekayo iyanwebeka
- ezinye izinto eziningi ezithuthukisiwe
Ibhukwana le-iWatermark Pro 2 Win
Izinhlobo zangaphambilini ze-iWatermark ze-Mac ne-Windows
Izinhlobo zakamuva ze-iWatermark ye-Mac, iOS, Win ne-Android
Izixhumanisi zenguqulo ngayinye, imininingwane, i-OS, ukulanda kanye nencwajana
"Omunye engicabanga ukuthi ngiyawuthanda ngomkhiqizo wakho ukuthi ukubekwa kwe-watermark kusekelwe kumaphesenti ohlangothini lwesithombe, hhayi inani elithile lamaphikseli. Whey ingabe lokho kubalulekile? Ngidubula ngekhamera engu-24.5MP namakhamera amaningi we-12MP. Uma Ngifuna i-watermark yami isondele ezansi kwesithombe neminye imikhiqizo okufanele ngibatshele ukuthi mangaki amaphikseli.Uma ngisebenza ngesithombe esingu-24.5MP inani lamaphikseli engifuna isithombe siqhamuke ngezansi sizohluka uma siqhathaniswa esithombeni esingu-12MP. Uhlelo lwakho lokusebenza lusebenzisa i-% yobukhulu. Ngingakusebenzisa kuhlelo lokusebenza ezithombeni ezimbili ezihluke kakhulu futhi ukubekwa kwelogo kuzohlala kufana. Ngicabanga ukuthi lelo iphuzu elihle lokuthengisa. "
UDiane Edmonds - - I-YourWavePics.com
"Njengomthwebuli we-surf osebenza ngokuzama ukwenza izithombe zami zishicilelwe, i-iWatermark ibe yi- $ 20 enhle kunazo zonke engake ngazisebenzisa! Wonke umuntu ufuna ukuba uthumele izithombe nge-imeyili kodwa bekudla isikhathi esiningi ukufaka ama-watermark ngesandla ukuzivumelanisa nokumile nokuqondile ngizamile ukusebenzisa ukucubungula kwenqwaba ye-Photoshop Elements. Kunzima kakhulu ukukwenza ku-PS5. Lolu hlelo lungigcinele isikhathi esiningi sokubheka ngokushesha ifolda yezithombe bese ngiyithumela kubashicileli abahlukahlukene. "
UPeter Kearns- www.pfphotography.co.uk
Chris- I-Action Digital Photography
“Senginesikhashana ngisebenzisa iWatermark futhi ngiyayithanda. Ngonyaka odlule ngilahlekelwe kakhulu ukuthengisa, ngenxa yokuthi imindeni ilande izithombe ezinobungakanani besikhwama kusuka kusayithi lami. Kulo nyaka bengisebenzisa iWatermark futhi ukuthengisa kwami ​​kukhuphukile. Abantu abafuni ukubona imininingwane ye-copyright maphakathi nesithombe. Kungumkhiqizo omuhle, intengo enhle futhi okulula kakhulu ukukusebenzisa. Ngiyabonga ngokungisiza ngivikele umkhiqizo wami! Ukuthula. ”
UJon WrightUbuciko be-J & K! - http://www.artbyjon.com
"Ngibhala izindlu ku-craigslist zokuqasha futhi ngadunwa ezinye zezithombe zami NGAPHAMBI kokuba ngithenge i-iWatermark. Manje abakhohlisi bakhetha enye inhloso njengoba iwebhusayithi yami ifakwe ku-pic!"
Faka isikhombisi segundane kumbukiso wesilayidi ukuze ume.
Ukubuyekezwa Kwe-Mac Informer 6/3/2021
Isoftware Engcono Kakhulu Yesithombe 2020
Isoftware Engcono Kakhulu Yezithombe eziyi-10 ngo-2020.
- Ukubuyekezwa nguLiza Brown, Filmora 1/15/2020
Ukubuyekezwa kwe-iWatermark Pro ye-Windows
- UTarekma 12/9/2019
I-Best Watermarking Software yango-2018
Uthole Izithombe? Faka i-Watermark Kwelinye Nelinye Ukuze Ufune I-copyright Yakho
- UJeffrey Mincer, I-Bohemian Boomer
Ukubuyekezwa kwe-SMMUG kwe-iWatermark Pro
Ukubuyekeza ngokuphelele eSweden kwe-iWatermark Pro. - UHenning Wurst Funda isihloko sonke
UJay Nelson, iMacworld
Amagundane angu-4.5 kwangu-5.
- UDan Frakes, iMacworld
- UDaniel M. East, iMac Design Magazine, Isilinganiso:
- UDave Johnson, iPc World
Funda isihloko sonkeIzindaba zeMacsimum ukubuyekeza kunikeze i-9 kokuyi-10.
Ukubuyekezwa Kwe-PC World
UDiane Edmonds - YakhoLaPics.com
UPeter Kearns - www.sesifoto.co.uk
UChris, i-Action Digital Photography
“Uhlelo lwakho lube nje lusizo olukhulu kimi. Ngangihlala ngifaka izithombe zomshado wami, umcimbi nomfanekiso eventpix.com. Kusizile ukumisa ukusetshenziswa okungagunyaziwe komsebenzi wethu futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngiyabonga ngalokho. Sijabule ngokukhokhela uhlelo olukhulu. ”
UJon Wright, i-J & K Creative! - http://www.artbyjon.com
"Ngibhala izindlu ku-craigslist zokuqasha bese ngiduna ezinye izithombe zami NGAPHAMBI kokuba ngithenge iWatermark. Manje abakhohlisi bakhetha elinye ilitshe kusukela iwebhusayithi yami ifakwa ku-pic!"
Kusuka kwisiza sokulanda isoftware iMacUpdate - Mac.